Kungani I Get Married Ngakho Young? — UHAMBO LEE - OFFICIAL SITE
Kungani I Get Married Ngakho Young?
Izolo ngenza sekwephuzile ebusuku stop at esitolo ngiyothatha izinto ezimbalwa futhi Ngaxoxa kakhulu ne cashier. Senza inkulumo encane njengoba yena bangahlola izinto zami, bese enginika ikhadi isaphulelo kodwa ngamtshela umkami kwadingeka kakade eyodwa. Kulapho ingxoxo got fun. Ngiyazi le ngxoxo kahle ngoba ngiye izikhathi eziningi ngaphambili. Lenza into efana nale ...
Person: Ini!? You ushade?
Me: Yeah Bengilokhu ngishadile ezimbili nengxenye iminyaka amazing.
Person: Uneminyaka emingaka? Ubuka like a baby.
Me: Ngikhathazekile amashumi amabili nantathu.
Person: Uneminyaka abasebasha! Kungani emhlabeni ubungeke ukwenze lokho?
Me: Kungani ngingazange ngingenele?
In 2009, Ngashada eneminyaka engu ngokulambisa kwezomthetho kanye ngokulambisa negama engamashumi amabili nanye. Ngesikhathi sokuqomisana yami, engagement, futhi umshado iDemo, Ngiye ngacelwa kaningi imibuzo efana, "Kungani ukushada abasebasha? Yini rush?”, intandokazi yami siqu, "Wena kwakufanele alindele futhi babejabulela ukuphila kwakho!”
Abanye abantu bebuza lemibuzo naningabafokazi, kodwa abanye baba ngamashumi umndeni. Ingabe ngangikhonza crazy ukushada at a "abanje” age?
Well ngininike izizathu ezintathu nganquma ukuphinde ashade uma engakwenza.
1. Ngahlangana nowesifazane kokuhlonipha uNkulunkulu
Njengoba i freshman eyishumi nesishiyagalombili ubudala ekolishi leBhayibheli, Bengingakhulumi ngenkuthalo ngifuna umfazi, kodwa uNkulunkulu wakubona kufaneleka ukuba ukwethula kimi ukuba owesifazane osemusha ngemva inhliziyo yakhe. Wayemuhle, kodwa okubaluleke wayemthanda uJesu. Wayengumngane eqaphela ukuthi uyisoni abadinga umusa kaNkulunkulu, futhi enomuzi othobekile, inhliziyo sifundiseke. Sagcina yingxenye yesonto efanayo, ngakho mina ngikwazile ukubukela wakhe bakhonza, ikhule, futhi sinike ngokwethembeka isikhathi sakhe kwabanye. Ngaqala ukukhuluma embuthanweni wami kwangaphakathi ngaye. Abangani bami, abeluleki, futhi abefundisi bonke bavumelana – yayingowesifazane obukeka kokuhlonipha uNkulunkulu. Bengibona ngihamba naye naye ngothando ukuphila kwami ​​konke.
2. Manje ngase ngikulungele
Ngalesi sikhathi ngaqala ukucabanga mayelana namaqiniso omshado futhi lokho kusho ukuthini bophezela ngokwakho umuntu for a lifetime. Ngazibuza Ngangineminyaka noma cha abavuthiwe futhi unesibopho ngokwanele. I ehlola imiBhalo futhi ecabanga imithwalo yemfanelo yokuba indoda, bazokhuluma nabangane abashadile kanye nabeluleki. Ngemva eziningi lomthandazo futhi ingxoxo, abeluleki bami futhi abefundisi esontweni wami wangitshela babecabanga ukuthi ngase ngikulungele ukuyeshela. I yayijabule. Kodwa bengingeke baphishekela wakhe uma ngicabanga ukuthi ngeke ukulungele ngokomoya amholele, ukuhlinzekela wakhe, futhi abe yinhloko yomkhaya.
3. Umshado isibusiso
Ekuqaleni ngazizwa sengathi Kwadingeka abonise naysayers ukuthi oshadayo abasha ok ngezinye izikhathi. Kodwa lapho ngibuka in the Scriptures angizange ngisithole Izinto like, "Umshado silingana ekufeni! Usibalekele!” noma, "Beka umshado off uze ukwazi ukukuhlehlisa yisiphi isikhathi eside,” noma, "Uthole Kuphela abashadile uma uku eseguge kakhulu ukuba bajabulele ukuphila,” noma, "Play insimu okwesikhashana bese sithathe esihle.”
Kunalokho ngathola imiyalo efana, "Balekelani nenkanuko bobusha”, mina ukufunda izindima like IzAga 18:22 Lowo othi, "Lowo ithola umfazi uthola okuhle futhi uzuzile isisa kuJehova.”
Ngakho uma abantu bethi, "Yini wayenazo ukuba ashade abasebasha?” Ukusabela kwami ​​entsha iyona, "Ubhekene kokubuza umbuzo okungalungile.” Ngicabanga empandeni mbuzo ngoba kucatshangwa ukuthi umshado entshontsha okuthile kude nami, sengathi ebusheni bami wenziwa kungachithwa othandweni ozibophezele womhlatshelo lapho angasetjentiswa injabulo abayitoho flakiness.
Umshado uyisipho esihle esivela kuNkulunkulu! Kuyindlela womusa. Ngathola inkosikazi, futhi lokho kuyinto enhle. Angazi uyavumelana nala othi, silahle izibusiso zikaNkulunkulu abacebe njengoba nje ongakwenza. Kunalokho Ngingathi ukujabulela izipho ezinhle zikaNkulunkulu futhi ngumphathi kubo for inkazimulo Yakhe.
Lokhu akusho ukuthi wonke umuntu kufanele ashade uma engakwenza. It ngabe osekonakala uma ngingathanda baye bazama ukuba ukushada ngaphambi kokuba ngase ngikulungele. Abanye bethu kudingeka abavuthiwe more, futhi abanye bethu kudingeka bathandaze bacele ukwaneliseka futhi ziyakwethemba iNkosi nesikhathi Akhe. Umgomo wami akusho ukuthi omncane senishadile, ongcwele more wena. Ngifuna yokususa inganekwane ukuthi kufanele alibale ekhula, cabanga nje umshado kanye esikuwo amathathu noma ngaphezulu.
Last night on Twitter othile wangibuza ukuthi ngiyazisola oshadayo abasebasha. impendulo yami? Akunjalo neze.
Kuyinto nesinye sezinqumo best I eyake. Sengingumuntu ojabulile kanye bengcwele kunamanye ngineminyaka emibili nengxenye edlule, futhi lokho yinto enhle. Angifuni ukuba akwenze kube sengathi Ngingumfana ezinye anomaly super ezingavamile. Ngiyazi inala abantu eyashadela njengoba nje insizwa noma abancane kunami. Nabo Ngawubona umshado njengesipho futhi babone isithelo leso sipho. Me and umkami bangase babe abasha manje, kodwa mina ngithandaza ngomusa ukuba bathande umkami kahle kuze kube sekupheleni ezimpilweni zethu. Kuze kube yileso sikhathi ngifuna ukulalela ukuhlakanipha izAga "uthokoze ngomfazi wobusha bami.”
Jannon Fitzpatrick • August 19, 2013 at 6:58 am • Phendula
Ngenhlonipho ungavumelani Kevin Ferere. Ngeke wazi ukuthi lokho uthando oluyikho uze nokwazi ukuthi uNkulunkulu ungubani, ngoba uNkulunkulu Love! IBhayibheli alisho lutho mayelana uphola emhlabeni noma unabanye ukuthola ukuthi umuntu. Empeleni, Isaka layed ku Rebecca futhi wayazi ukuthi yilo yini ngaye. Akazange usuku emhlabeni noma ukukhuluma uLeya ukuze ngakho uma eseneminyaka kangcono ngakho ubezokwazi yini noma cha uRaheli ngempela lokho ayefuna noma cha.
Ecaphuna kokuhlangenwe nakho yami, Ngenza usuku abanye futhi bathola lokho uthando kwakungelona. Akukhona nje kusukela ubudlelwano yami, kodwa abazali bami’ nodade’ ubudlelwano. Inkinga kwabe kungukuthi, babengakholwa ubudlelwano zisekelwe eZwini noma Ethandweni LakaZimu futhi yileso isizathu esasenza baphile akusebenzanga. Ngayithola uMuntu Kokuhlonipha UNkulunkulu, ngakho-ke ungakwazi zifezeke ngendlela okushoyo, KODWA Ngikholwa ngenhliziyo yonke ukuthi uma ngingathanda bangilindile, bagcina inhliziyo yami kulezo nezinye ubudlelwano bekungenjalo ungifanele, I been sesimweni esingcono kakhulu nokuncane eziphukile, ukuze recieve umyeni wami kusukela umbono womuntu wesifazane ZikaNkulunkulu kunokuba ngombono ile sowesifazane nge wemithwalo ukusebenza ngokusebenzisa.
Ukudelela okuhloswe, kodwa ngikholelwa ukuthi kuyinto kakhulu okungalungile ingubo isitatimende ezingase ngempela ukuqondisa izinhliziyo abasha ayo ngokuthatha indlela okungeyona. (ulwazi lwe-Google ngezothando ZikaNkulunkulu vs. Ukuqomisana Modern. Kukhona ezinye izinto ezinhle ngempela lapho.)
Deborahfatuade • August 19, 2013 at 6:59 am • Phendula
KevinFerere • August 19, 2013 at 6:59 am • Phendula
Wena ubuye bangivivinya kwesokudla. IBhayibheli ungasho khona noma yini-ke ufuna, kodwa uwena nakho konke onakho sizoya ka. Futhi bani wena ngibiza uNkulunkulu livela umvuthwandaba ngowabelana afundziswa abuye nakho yakho. Ekupheleni, lokho enikholelwa ukuthi yiyona ukukhetha, kodwa lokho owaziyo ukuthi ephoqelelwe esingokoqobo.
futhi yeah, isitatimende kungenzeka kancane jikelele, kodwa kufanele zithathwe nge uhlamvu usawoti, njengoba lutho.
Lokelani70 • August 19, 2013 at 7:00 am • Phendula
Ngiphinde ngenhlonipho ungavumelani Kevin Ferere.
Into nje okuye kungase kutholakale ukuthi wenze isinqumo unembeza akuvumi ukuba aphile ukuphila kwakho uNkulunkulu ngezwi lakhe, ibhayibheli. Ngokunjalo, thina abantu abaye benza isinqumo siphile emshadweni Kokuhlonipha UNkulunkulu, ngezwi likaNkulunkulu. Iqiniso lodaba, eyodwa ngeke babe nokuqonda okuphelele kwalesi blog uma uNkulunkulu akubi yini okumelwe ize kuqala ekuphileni komuntu.
Ukuthandazela BONKE imishado! Inkosi ikubusise!
KevinFerere • August 19, 2013 at 7:00 am • Phendula
Ngenze isinqumo esiwujuqu sokuba uthole Nkulunkulu ukuzinakekela futhi ngingalindeli ngalokho umuntu singifundise. Ungakhathazeki, Ngangiyinsizwa njengawe.
Ngitawutsandza ukusho, ungayitholi Nkulunkulu. Ibhayibheli wathi thina usufile. abantu abafile abakwazi kwenza lutho. Nkulunkulu esibona.
Oh… Ngiyaxolisa Kevin, kumelwe kudidaniswe. UNkulunkulu Ngikhonza akayena uNkulunkulu self-abafuna. Okukhathazayo akuyona intando kaNkulunkulu, kodwa umusa eachother kakhulu ngendlela Uyasithanda is! Like I wabhala ngaphambili, ngokubeka uNkulunkulu kuqala yilokho kanye okudingekayo ukuze Ngokuphelele ukuqonda le blog, njengoba impendulo yakho kunembe iphuzu yami. Kwangathi KONKE esikushoyo nesikwenzayo siyomjabulisa uNkulunkulu. God Bless futhi ube ngokwakho i kusihlwa emangalisayo.
Lady Mukete Arnold • August 19, 2013 at 7:00 am • Phendula
hahaha, qhubekani nikufuna, uzothola Him- khumbula indalo ayembuli Naye futhi. Empeleni, I ll ukukunika iqhinga, sikhthe iBhayibheli uhambe uyiphonse efana incwadi indaba siphawula zonke izimangalo kwenza ngisho ngekhanda kubo Khona, hlola amanye amabhuku bese uqhathanisa izimangalo. Kodwa nakanjani kuyodingeka othile ukuba akuchazele wena somethings, ungazindeli ngoba wena obefuna weqiniso.
Uma ukholwa kuNkulunkulu okuningi usasho ongayenza, kungani unomuzwa isidingo ukufakazela kuYe kangaka? Anginayo kuNkulunkulu, ngoba Muhle kimi. Ngingu abamthembanga yimina. Kodwa Ngiyaxolisa, awukwazi baqonde ukuthi yini ongayenza ukuze ubonise?
Delinabini • August 19, 2013 at 7:01 am • Phendula
angivumi ungaqiniseka kanjani uNkulunkulu futhi ungaba Nkulunkulu kube indlela ingabe ngempela ukwakha ngokwakho uma ubenguNkulunkulu?
KevinFerere • August 19, 2013 at 7:01 am • Phendula
Iphutha lami, inkinga: *Anginayo ukufakazela uNkulunkulu. *
Kodwa amazwana kusho lokho elikushoyo. Kungakhathaliseki uphakathi kini, yilokho wena. Ungesabi ukwamukela ukuthi iqiniso nje ngoba ubhekene wafundisa ukuthi akulungile.
Addis Hunter • August 19, 2013 at 7:01 am • Phendula
100 % nawe! Nami ngihlangana nomyeni wami ngesikhathi 20 futhi ngemva konyaka sashada. Kuye kwadingeka ukuba babe izingxoxo efanayo nabantu ongabazi okungahleliwe, umndeni kanye nami abangane ukukugqugquzela: Kumelwe sihlale sithembekile kuJehova, umkakho lovely ngazo zonke izindlela ukuthi discribed egameni elithi. Mina nomyeni wami manje 30 ubudala nalapho ngithi abantu Ingihlabe “Ngokujabulisayo” ngishadile cishe 10 iminyaka befuzela!!! “Ngempela”?? Ukwenza imibono efanayo ezingacacile “zokuchitha ebusheni bethu” njll njll. Kepha NKULUNKULU bekulokhu unesihe futhi okuhle kithi ukuthi mina Cant ukubuchaza ngamazwi ngibusiseke kangakanani ukuthi ngihlangana nomyeni wami ngenkathi ngenza. Siyathanda reminising eminyakeni yethu ekolishi ndawonye, futhi waphupha zonke izinto ezinkulu ekuphileni analo kithina ngaphambi! Sine 2 amantombazane amahle umntwana womfana endleleni (bona ngokuzithoba wathandazela kulo nyaka futhi uNkulunkulu wamnika) , (atually Ngingumfana ngenxa namuhla ;-))..futhi thina Ayikwazanga kube ESIQINISEKILE ngaphezulu Kwaba union Devine ezivela kuNkulunkulu ukuze basiyise ndawonye.
Ngokwemvelo, thina singaphelele (nakuba abangane bami bacabanga kanjalo ngoba dont sibhekene nezinkinga yezwe evamile ihluka sokungathembeki, indelelo futhi ukuphikisana njalo), kodwa singazi nokungavumelani, kwemizwelo, dificulties zezimali njll, umehluko wukuthi thina Ukuthembela KuNkulunkulu ukuhola izinyathelo zethu, thina bahloniphane futhi sizame konke okusemandleni ethu ukuze ungalokothi ulahlekelwe NGOKHOLO, ukuxhumana, futhi bafune isiqondiso somoya ongcwele njengoba umbhangqwana nomyeni individually..My iyona umuntu ohlukile kakhulu kunabo bonke engake ngababona futhi sobabili baqonde ukuthi isihluthulelo senjabulo emshadweni AKUYONA ekwenzeni noma ukuthenga “izinto” ukwenza eachother ujabule kodwa Ukwazi singobani Kristu, elandelayo imiyalo yakhe ngomshado Loving omunye komunye ngaphandle kwemibandela, kungakhathaliseki ukushiyeka kwethu noma kanjani singaze “ukuzizwa” ngaleso sikhathi , wazi ukuthi INJABULO uyohlale umuzwa wesikhashana ukuthi uhamba, kodwa INJABULO kweqiniso ivela kuJehova kuphela.
Ngifisa wena nomkakho iminyaka eminingi INJABULO Ubusisiwe!!!
I Love umculo wakho nge indlela ;)..
Josh • August 19, 2013 at 7:01 am • Phendula
Wena isibonelo kakhulu intsha engamaKristu abafuna mbongeni uNkulunkulu ngendlela abaphatha ngayo abesifazane! Ngiyabonga! Ngisanda sathembisana umshado, am 22, futhi babheke phambili ukukhonza uJehova emshadweni iminyaka eminingi ezayo!
Johnny_renteria • August 19, 2013 at 7:02 am • Phendula
Ukholwa noma ungakholwa kodwa i washada eneminyaka engu 18. Ngineminyaka engu neze ngomumo ukuze ube umyeni ngomqondo zezimali futhi ngase kakade ubaba. Kodwa ngangisanda wanikela ngokuphila kwami ​​kuze kube Kristu futhi ngangazi ukuthi abesifazane nganginaye kungaba nguye sikhule nami. Abantu bayangibuza izinto ezifanayo kanye. Ngikuthola ngidabukile Nokho ukuthi umshado ubonakala into embi. Namuhla, Bengicabanga ukuthi ngafika esiphethweni sokuthi abantu baye baba ngamagovu ukuze umcabango wokuphinde ozobe lomunye umuntu cishe kungenakwenzeka. Umshado awulona mayelana lapho futhi kungani nishade kodwa ngokuthi ubani kugxile ukuthi umshado. Futhi kufanele kube christ…
deborah ft sipho mbele • August 19, 2013 at 7:02 am • Phendula
i think u r trip..i kwesokudla abe frnd eyashadela @ 19 (bona HV beshadile 4 6 yrs NW)n lkng @ naye manje siyaqaphela ngaphandle kokwamukela uKristu empilweni yakhe dat is d isinqumo esingcono uye eyake yenziwa….Nokho i Kumelwe ngivume i am ayikulungele 2 uthole married..it kuyangethusa cos angifuni 2 ungumlutha 2 d umuntu okungalungile 4 d ukuphila kwami ​​konke kodwa ngiyazi uJesu akasoze ngenze d ekukhetheni okubi…futhi i ngezinye izikhathi uzibuze y ukushada uma i uthole zonke i want nakuJesu n he ze BRK hrt yami?….isinqumo ur tye n i GV u izithupha 4 okuyinto!:)
MNM103 • August 19, 2013 at 7:02 am • Phendula
Lokhu ngempela baye bafundisa kimi okuningi. Futhi kwaba enkulu kokuzwa umkakho uhlangothi lwawo kakhulu!
Lance Peterson • August 19, 2013 at 7:02 am • Phendula
Awesome. Indodana yami futhi washada 2 1/2 edlule ukuze owesaba uNkulunkulu emangalisayo futhi amadodakazi womabili Esegugile ka 19. Indaba yakho sangikhumbuza kubo.
Brandon Clements • August 19, 2013 at 7:02 am • Phendula
Ngiyakuthanda lokhu Trip! Ngashada ngo- 22 ngiyithanda umshado wami. Kuyinto funny ngoba kwadingeka ingxoxo efanayo nge isikhonzi gas esiteshini mayelana inyanga edlule. Yena wadonsa wonke, “Yiziphi izizathu ezinhle zokushada lapho ungaba ubisi mahhala?” umbuzo bese inhliziyo yami waphula ngoba wakhe. Ngase ngikhuphukela ukumtshela ukuthi umkami wayengathandisisi inkomo–futhi ukuthi ubeyisibenzi amangalisayo ngiyamthanda.
Izikhangibavakashi • August 19, 2013 at 7:02 am • Phendula
loool uku funny = D
Louib2001 • August 19, 2013 at 7:02 am • Phendula
Dumisani iNkosi ngawe mzalwane umkakho lovely wobusha bakho. Ngikhulekela ukuthi iNkosi uyothela umusa njalo kukho konke ukuphila kwenu, ngokuba ulalele izwi lakhe. I am 28 futhi sesishade iminyaka engaba mibili futhi mina nomkami sinomshado ojabulisayo futhi othandekayo 10 Ibhu ingane endala. Ngangilokhu ngifuna ukushada abasebasha, kodwa mina ngiyakholwa ukuthi awuzange isikhathi kodwa mina kuze iNkosi yasikhupha into yami okuhle cishe 5 iminyaka edlule (ukuba eqondile sahlangana ngosuku safike engazalwa ngokusha 31 Dec 2006). Angazi asizange lapho ezizoba ndawonye njengoba ngithatha isancinza sami njengoba udade abavamile esontweni. Ngangikhuluma nabo bagxile intuthuko yami engokomoya, kodwa eminyakeni emithathu edlule amehlo ami avuleka ngabona futhi bonke abanye njengabangelutho ezikushoyo umlando.
Kuyinto e-ajenda likaSathane abantu ukuba ashade hhayi, ukuze baphile esonweni sesivele ukwazi ukuthi kuzokwenzekani. Ingabe sabuka izinga yesehlukaniso emzimbeni namuhla? Indlela abafowethu nodadewethu ukuphinga esontweni, ngenxa yalokho umphakathi ngobulukhuni.
Uma sibheka indlela emadolobheni zethu zigcwele abayizisulu zalobu budlova bentsha namuhla, Sazi uthathe isikhashana uma ngicabanga ezinye zezimbangela? Okwamanje indoda exchange amagugu Kokuhlonipha UNkulunkulu I-ism isiyingi konke lokhu waphela. Ngisho Abazali abangamaKristu ngokungazi ukugqugquzela ukusebenzelana isiyingi nge iyadumaza izingane zabo ukungathengi noma yini ukushada abasha (eneminyaka engu-ukukhathazeka ngokusobala). Izizathu ngicaphuna”udinga ukuthola imfundo, mhlawumbe uma uqedile enu futhi ibe umsebenzi ohloniphekile, ke uqale ucabange ngomshado”. Lokho umsindo ohlakaniphile akunjalo ? Ngakho kwenzekani lapho ingane yakho lobuKristu uya enyuvesi bese kuqhutshekwa nomngani umfana / yokuthi intombazanyana yawo noma ezobuKristu noma?
Sicela musa uthole nginamanga(ukuthi nje ezinye izinto engizizwe uhlangabezana), ngoba isitatimende esingenhla akusebenzi zonke. Imfundo ibaluleke kakhulu njengoba izuza ulwazi ngoba umsebenzi abafanele ngakho basebenzele futhi bondle imikhaya yabo esizayo njll, kodwa umshado yamabhuku ayeke omunye angaphumeleli kulokho wake endaweni empilweni umuntu ekhetha ukulandela, empeleni umshado jikelele kutfutfukisa kukhula lokuhlanganisa i.e inkonzo enkulu, Heath ezinhle, ingcebo uhlu kuqhubeka. Khumbula ezimbili kuba nyamanye futhi kungaba ukuxosha 10 000 Hewu, lokho kusho ukuthi bayavumelana yini abake becela uNkulunkulu ngokwethembeka abayoyithola, awesome…..
Ngo eduze Ngithanda ukuphakamisa ukuthi thina njengamaKristu uqale ukufundisa izingane zethu zisencane ngokubaluleka eziphilayo ngoNkulunkulu kuqala bese okwesibili ukubaluleka komshado( kulabo uke uphiwe isipho) ukuze ziyokhula zifuna ukujabulisa uNkulunkulu kule ndawo. Nakulokhu futhi kwenziwe kahle mfowethu futhi bonke abaphilayo izwi likaNkulunkulu. Hlala elibusisekile.
Anna • August 19, 2013 at 7:03 am • Phendula
Lokhu wakhuluma ngempela kimi. Ngikhathazekile 21 othandana naye hhayi Ngingakutshela ukuthi ngizisize kangaki utshelwe ukuthi Ngingumfana “usemncane kakhulu ukuba ucabange azinze”, Ngingaze ngethembe ukuthi “ukuphila bukhoma yokuqala”, uqede esikoleni bese kuba futhi ukusungula umsebenzi ngaphambi ngiyifake usathandana / umshado. Une ubufakazi emangalisayo futhi ekhuthazayo. Ngifisa wena nenkosikazi yakho kukho konke ukuphila kwazo izibusiso nenjabulo ndawonye!
engaziwa • August 19, 2013 at 7:03 am • Phendula
I am 20 futhi Angikaze ubuhlobo ngakho angiyi ukuba ashade nge 21 kodwa mina nakanjani ukuhlonipha nga kho logic. Mina njalo engqondweni “ukuze ngamunye siqu sakhe”. Ngicabanga wena nenkosikazi yakho nakanjani hamba ibanga futhi ngiyaziqhenya ngakho izinyathelo ukuthi wathatha ngaphambi kokuba ishade. Kubukeka sengathi nobabili wakuthatha ngokungathi sína ngempela lo committment, engayala ihlombe.
Tony Doyley • August 19, 2013 at 7:03 am • Phendula
ngibusiseke kakhulu ukufunda ibhulogi yakho ngomshado esemncane. Umkami washada ngesikhathi 18 futhi siye beshadile futhi bejabule 10 iminyaka manje. Impela siye sabhekana ezinye izikhathi ezinhle nezimbi, kodwa ngiyakholwa kuNkulunkulu guided us kancane kancane yonke le minyaka futhi manje singabantwana kakhulu kunanini ngaphambili. Siyabonga ubufakazi bakho emangalisayo.
kle Isithombe • August 19, 2013 at 7:03 am • Phendula
Siyakuhalalisela umshado wakho abasha! Mina nomyeni wami wadabula into efanayo lapho sishada 8 edlule ngesikhathi 20 ubudala! Ngakho siyazi kahle ukuthi okuso! Abantu babecabanga sashada ngoba ngakhulelwa (Bengingekho) noma ngoba wayengumuntu komuntu wakwelinye izwe ongenazo (yena ube ngumhlali wase-America). Sasingenayo kakhulu abangane bethu ekhoneni yethu njengoba benza into eyodwa. Kodwa manje 28 bayeza emhlabeni nokuzama “Thola.” Ngithathe thokozani uNkulunkulu wangibusisa umyeni wami kungakhathaliseki ubudala yami. UNkulunkulu akubusise nobabili!
BTW Siphila endaweni DMV! (MD) mhlawumbe sonke ungahlangana phezulu noma ukuya esontweni ndawonye! Thina asinayo abangane oshadile lol.
KevinFerere • August 19, 2013 at 7:03 am • Phendula
Angicabangi yini eyebiwe kuwe, kungcono ukuthi yini kuthi shiya phansi. Kulungile ukuba isakhiwo eBhayibhelini, kodwa kukuwe ukuba zilawule ukuphila kwakho, hhayi incwadi; naphezu isiqondiso ukuthi inikeza.
Kuyinto nenhlalakahle encomekayo uzibophezele futhi abasha, kodwa ingxenye ukuthi “nenkanuko bobusha” iyona yokufunda kanye ezikhulayo oyithola lokuhlangana ne emphakathini uhlanganyela abesifazane ezahlukene. Ukufunda ukuthi yini oyithandayo futhi ungathandi ukwenza, ukubona, futhi uzizwe; esikhundleni ububanzi sakho ngakho kungagcini umuntu oyedwa nje.
Awukwazi ngempela ngithi kini ukuthi ungubani nokuthi yini uku mayelana, noma ngisho ukuthi ufuna ngempela, uma ungazange basebenzisana kodwa kangaka nabanye abesifazane ngawo ukubonisa ukuthi kuwe. Awazi yini Uthando uma ungazi ukuthi akusiwona.
Guest • August 19, 2013 at 7:03 am • Phendula
Awudingi ukwazi ukuthi Uthando aluwona uma wazi ukuthi yini Uthando. Ungakuchaza kanjani ukwazi uma umuntu ekupha inkohliso $100 bill ngaphandle kokuthi wazi ukuthi ngempela $100 bill ibukeke. Yinye kuphela ngempela $100 bill, nje ukufunda ukuthi futhi ungakwazi ukutshela lapho othile ekunika mbumbulu. Okufanayo uthando. Kukhona-mbumbulu eminingi laphaya, kodwa uma wazi ukuthi yangempela, ke uyokwazi ukuzibona inkohliso. Njengoba uNkulunkulu uluthando, lutho abangamhloniphi uNkulunkulu akukwazi uthando.
KevinFerere • August 19, 2013 at 7:04 am • Phendula
Ngakho kumelwe uphola emhlabeni uphinde uhlangane futhi ocansini nabanye abantu. Iphuzu My ncamashi. Kuyini uNkulunkulu kuyinto subjective. Ungase uzame kokuthanda imithetho ngakho ngoba imvelo yethu ukwenza kanjalo, Nokho, kumelwe wadedela leyo micabango kokuba ukuthi kukhona indawo kakhulu grey phakathi umongo.
Angeldoll1 • August 19, 2013 at 7:04 am • Phendula
Ngiphikisana isitatimende ucansi lwakho nabanye abantu- STD, AIDS nokukhulelwa okungafunwa, imiphumela ubuhlobo obunjalo. Uma umuntu ekuphishekela ubuhlobo obunjalo, babengeke ufunde mayelana nokuzinikela efanele futhi ngezici ezijulile futhi engokomoya zothando kunokuba nenkanuko. Futhi ngiphikisana imibono yakho mayelana uphola emhlabeni ngaphambi ufuna bophezela ngoba “ukujola emhlabeni” akuyona imfuneko ukwazi umngane womshado ovela nonspouse. Kokuhlonipha UNkulunkulu oqomisanayo / ukuphola lenzelwa abantu njengoba kuboniswe eBhayibhelini kuyilapho kokuba mutiple abalingani, ucansi ezivele zenzeke nje azivumelani izici izilwane.
Angeldoll1it yinhle ukuzikhohlisa kini ukucabanga ukuthi konke ubulili-non-somshado ngempela kuholela “STD, AIDS nokukhulelwa okungafunwa”… kodwa yebo, ubungeke wazi ukuthi uma abangazange basamukele ezithile ukuze uthole ikhanda lakho encwadini yakho enothuli ubudala futhi okuhlangenwe nakho ekuphileni.
Wena uyibuke omubi. Uma usuvuthwe nohlakaniphile, okwazi uzoba nihambahambe kulo ngendlela efanele. Lapho ugweme okuthile, sisondelene uza kuso. Gxila okuhle futhi yilokho uzothola. Kodwa-ke le nkolo yakho alifundisi ukuthi.
Josh • August 19, 2013 at 7:04 am • Phendula
“Ithando elikhulu umuntu kunalokhu, ukuthi umuntu adele ukuphila kwakhe ngenxa yabangane bakhe.” (John 15:13) Uyazi lokho uthando oluyikho uma wazi Kristu.
mnumzane, uma uya regurgitate umbhalo, komncane ongayenza isicelo ukucabanga zakho siqu kuso. Kuyinto inkomba, awusona isiqondiso inkulumo.
yena • October 3, 2013 at 12:25 pm • Phendula
azithathe lakho ku umbhalo akulungile futhi indlela ocabanga ngayo ngabe projecting ngokwakho njengomKristu engalandeli eBhayibhelini labaphila kodwa “izinkomba” ke kodwa ekhetha uphila ngezimiso zakho futhi ngamapiki ekhetha lokho, uma kukhona ukulandela lokho kaNkulunkulu ngokuphathelene….
Iningi okufunayo abathi ukuma kuyinto imfundiso yamanga.
Gabe Taviano • August 19, 2013 at 7:04 am • Phendula
Nice ukukubona ukubhuloga lapha Trip! Siyabonga ukuthandaza mina kuleli sonto, Nkulunkulu uqinisekile ubelokhu emuhle.
Into crazy mayelana nishada abasha kanjalo siwukuthi kubikwa ukuthi izindlebe namehlo akho aye avuleka kuNkulunkulu ngaphezulu iminyaka yakho ezimbalwa kunezinye ukuthi uvale kuYe off for isikhathi eside. Uyazi ukuthi uNkulunkulu iyingxenye somshado wakho njengoba nje kunjalo ngawo nobabili kukhona, futhi lokho omkhulu. Siyabonga ngokwabelana!
Madeleine Farrell • August 19, 2013 at 7:04 am • Phendula
Lena indawo enhle kakhulu umcabango inqubo. Ngashada ngo- 17 futhi umyeni wami 19. Ngesikhathi asikwazanga Christian, futhi, asizange 'kufanele’ shada. Namanje ngasizathu simbe esakwenza. Siye beshadile cishe 28 1/2 iminyaka manje, kukhona abazali ka 5 nogogo nomkhulu ka 2. Ngiyayithanda impilo yami. Hhayi ukuthi kunezikhathi emshadweni wethu ukuthi oyedwa wethu ngifuna uzihambele ze buya, akusho nentukuthelo kwakungeyona ingxenye yempilo yethu yansuku zonke isikhathi esithile, noma ukuthi ukucabanga EW wenza Iphutha elikhulu kunawo wonke ekuphileni kwethu kwakungelona senqubo yokucabanga evamile. Kodwa sazibophezela. Futhi lapho isehlukaniso akuyona inketho, NKULUNKULU fikisa ukuphulukiswa esikhathini.
Indodakazi yami washada ngesikhathi 20 futhi kwakungekho omunye isikhuthazo ike yatshela umuntu ithole esuka kubantu. Wayengazi ukuthi kungani abantu banomuzwa wokuthi sokugcina esikhundleni isibusiso ngesikhathi esifanele. Ngisho phakathi komphakathi wabenkolo yobuKhristu.
Indodana yethu ngakolunye uhlangothi washada ngesikhathi Christmas, eneminyaka engu 27. Vele wangakuthola intombazane kwesokudla. Enye into.. ilungelo umfana / intombazane uya e ilungelo umfana / intombazane ngisho ngokusebenzisa izikhathi ezinzima. Vele ninamathele Isiphambano.
CL • August 19, 2013 at 7:05 am • Phendula
Angikwazanga uvumelana kakhudlwana. Ngakho abantu abaningi bacabanga ukuthi umshado omubi kukhona ikakhulukazi asikho isizathu “rush” kuwo, kodwa into Nkulunkulu afuna kusisebentisa ukuze ababusise futhi angcwelise nathi. Ngiyabonga iposi!
>> Kodwa lapho ngibuka emiBhalweni angiwatholanga izinto ezifana, "Umshado silingana ekufeni! Usibalekele!"noma, "Beka umshado off uze ukwazi ukukuhlehlisa yisiphi isikhathi eside,"noma, "Uthole Kuphela abashadile uma uku eseguge kakhulu ukuba bajabulele ukuphila,"noma, "Google emkhakheni isikhashana bese ukhetha engcono kakhulu."
unina • December 9, 2014 at 1:48 am • Phendula
Ngiyabonga kakhulu for ukuvakasha blog yami – Ngicabanga ngacabanga ukuthi adedrss okuphakelayo ngawe (Mina oyofakile kumazwana yami). Une umndeni darling, Konje! Siyakuhalalisela yokugubha usuku lwakho!
Praisemovement • August 19, 2013 at 7:05 am • Phendula
Siyabonga obala yakho “okwenza uJesu ubukeka umuhle”. maqondana Mad ngoba indlela livin'and Bringin’ inkazimulo iZwi.
Andrea Paige Jackson • August 19, 2013 at 7:05 am • Phendula
Lokho kungubufakazi kumnandi. Futhi othumele ku okwami ​​kanye yokugubha usuku lapho umyeni wami edabuka yeshumi! (Sashada OLD, Nokho.) : )
Jcsmsoul • August 19, 2013 at 7:05 am • Phendula
god bless u umzalwane! ngiyazi kahle usho ukuthini nakuba i wathola uJehova eziyolandela ekuphileni kwayo i ufisa i wayeshade Umuntu othile owesaba uNkulunkulu thats ukwethembeka kumkakhe! lezi DayZ kanzima ukuthola ukuthi yayo kakhulu! futhi esinye isizathu i sethemba futhi sithandazela i ishade futhi ukuthola umuntu ngoba u dont nomuzwa wecala lapho wenza uthando lapho washada ur! god bless u!
Jazmin • August 19, 2013 at 7:05 am • Phendula
Ngiyabonga kakhulu kube yilowo nalowo ngeke zibheka umshado njengethuba isibusiso. Yilabo kuphela ukuthi uthemba futhi ukholwa iNkosi yethu uJesu Kristu ngeke. Mina ukuba washada esemncane kakhulu futhi ngezinye 28 iminyaka kimi ubudala futhi umyeni wami kufanele 3 izingane amahle ezimpilweni zethu abazinikele simdumise futhi akhulekele ubaba wethu osezulwini. Umshado akulula Nokho, it has kungcono ube nezikhathi ezinzima nezimnandi kodwa ngomusa nesirhawu sakaZimu futhi ozinikela intando yakhe eyodwa uyakwazi zikhule. Ngiyabonga kakhulu indaba yakho emangalisayo uyisibusiso kweqiniso. Wami iNkosi ingaqhubeka ukuvumela wena nenkosikazi yakho ikhule ngicela ukuhlakanipha kwakhe kakhulu ngazo zonke izibusiso eziningi umusa wakho.
Tachy Musica • August 19, 2013 at 7:05 am • Phendula
Ngashada ngakho “young” kanjalo, futhi lokhu kuyisibusiso, thina njalo ndawonye (ezihlanganisa nendodakazi yethu Yiqiniso), esabelana konke, futhi basizane, abanye ppl bacabanga ukuthi uma senishadile abasha kuyoba isikhathi esifushane, kodwa sibonga uNkulunkulu thina cishe 8 iminyaka bashada futhi ebaluleke kakhulu bezama Servin’ UNkulunkulu ngazo zonke izikhathi…Izibusiso
Agopylove09 • August 19, 2013 at 7:05 am • Phendula
ukuthi is kanjalo awesome!! im 25 futhi ive wacabanga yini zonke eza kanye nokuba umfazi omuhle futhi ngempela sokuthobeka nokuba unkulunkulu njengoba isikhungo sakho futhi njalo sifuna iseluleko sakhe ukuze konke futhi nje ngempela ngokuvumela christ bahole futhi ekwakheni ukuthi ubuhlobo emhlabathini esiqinile christ jesus..falling uthandana umsindisi wethu wokuqala ngempela kumele!! kokuba ukuthi ubuhlobo obuseduze HIM alllows ukhule futhi ukuthi yini uthando ngempela futhi NKULUNKULU hlinzeka ukuthi uthando ukuthi u ukunikeza kanjani noshade naye.. ngakho greatful umsindisi Ngubani njalo ihlinzeka ..<3
Joe Stevens • August 19, 2013 at 7:06 am • Phendula
Am i oldee ngubani uvumelana ngokugcwele nalo Triplee. Nakuba-ke kuba imivimbo ezahlukene (ubudala) ngoba abantu ehlukene. Futhi wonke umuntu kufanele angene ngesikhathi uNkulunkulu wabo-eklanyelwe. I am 50 yrs ubudala, washada isithandwa sami lapho ngineminyaka 23 yayingowesifazane 20! Manje 27 iminyaka futhi 1 Ngemva kwenyanga, kukhona okuqhubekayo (okuhle) iziqhumane phakathi kwethu, namanje ziyahlanya othandweni, abangane engcono sasihambisana enjongweni kaNkulunkulu. Bekungeke yini ukudayisa engu ngashada ngoba 6 Ngemva kwezinyanga! Kodwa ngisho izingane zami kufanele bazi circumstacces zabo akuzona ngempela ezifanayo nezethu, futhi kukhona izikhathi kaNkulunkulu yenziwe futhi uyifake nasezinhlelweni ngabo nse.
Femi usozigidi • August 19, 2013 at 7:06 am • Phendula
Am i oldee ngubani uvumelana ngokugcwele nalo Triplee. Nakuba-ke kuba imivimbo ezahlukene (ubudala) ngoba abantu ehlukene. Futhi wonke umuntu, okwase ukushada ngesikhathi uNkulunkulu wabo-eklanyelwe. I am 50 yrs ubudala, washada isithandwa sami lapho ngineminyaka 23 yayingowesifazane 20! Manje 27 iminyaka futhi 1 Ngemva kwenyanga, kukhona okuqhubekayo (okuhle) iziqhumane phakathi kwethu, namanje ziyahlanya othandweni, abangane engcono sasihambisana enjongweni kaNkulunkulu. Bekungeke yini ukudayisa engu ngashada ngoba 6 Ngemva kwezinyanga!
Reverandjeff • August 19, 2013 at 7:06 am • Phendula
Ngiyazi ukuthi lokhu omunye kahle… Kugubha iminyaka yethu 13 somshado, futhi ngiphephile 35.. Ngase abantu efanayo bengibuza ngendlela efanayo, kodwa sobabili nje wayazi uNkulunkulu wayenqume ke futhi wawenza. Thina eyayiphambana izimpilo nomunye ngezikhathi OBALULEKILE sikuphi URose ihange ngamunye abanye, nge ihange ezivamile Kristu. Ingxenye best lapho sithola ithuba lokuxoxa nabantu abasebasha ngubani uhlushwa ubudlelwano / umshado futhi sithola ukutshela ubufakazi bethu obumangalisayo !!! Empeleni, kwadingeka ezinye zalezi nezingxoxo JPaul eminyakeni ethile edlule.. izwe Encane !!! UNkulunkulu awuniké labo abakufuna le KWESOKUDLA VALUE uhlelo, futhi Siyayazisa ubambo yethu esikhundleni Runnin ngemva chickenbones. :)
Jeff Young • August 19, 2013 at 7:06 am • Phendula
Oh futhi ngenxa ukwazi, hlola nathi nganoma http://www.facebook.com/reverandjeff #GotAGodlyDime
Bobshumaker • August 19, 2013 at 7:06 am • Phendula
Ubaba wami & Umama babe sweethearts esikoleni esiphakeme futhi washada ngemva kokuthweswa iziqu (bobabili 18 ubudala). Zisese ejabulayo emshadweni kube yilolu suku nakwa ungakaze baveze sazisola ngezimpilo zabo ndawonye. Ekubeni umuntu omdala kungase kuqale emshadweni – futhi isimo sakho sengqondo ngokuphathelene isinqumo sakho olunamagama abazali bami. imishado abesaba uNkulunkulu banomthwalo kuyivelakancane kuleli khulu leminyaka….UNkulunkulu uzonibusisa futhi sigcine wena ujabule okungenani 50 noma 60 iminyaka!
Monique Jolicia • August 19, 2013 at 7:06 am • Phendula
Likuphi indaba yenkosikazi?
Jeffreycotton7 • August 19, 2013 at 7:06 am • Phendula
Ngiyambonga wena nomkakho kangaka ngokwabelana izindaba zakho. Ngikhathazekile 21 nokuzizwa njengaye Ngithathe kokudabula cishe isimo esifanayo. Ngithathe nje ungashadile okwamanje. Nginayo engqondweni ka kungani ulinde uma wena nomaqondana wakho uthando, kokubili ezingokomoya, omuhle, futhi ephelele ngokusebenzisa ngamunye amehlo abanye. futhi intombazane yami angingabazi ukuthi siyaphi kumele washada ngolunye usuku. Kodwa yize yinto esiyifunayo sobabili ukuba ashade, uneminyaka ngaphezulu kuthathe isikhathi sakhe; esinalo sonke isikhathi uhlobo emhlabeni umuntu. Ngingumfana omkhudlwana ASAP Asibona wathembisa kusasa uhlobo lomuntu. Ngakho akufanele ulinde? Nanguya intombazane kakhulu smart. Yena kungikhumbuza nomkakho indaba yakhe kancane. Ecabanga ukuthi izinto kungase kume endleleni esikoleni futhi umsebenzi imigomo. Kodwa lokho okwengeziwe maqondana inkulumo izingane ngemva komshado. Ngihlale ngitshela wakhe ukuthi angifuni ukuba nengane yethu yokuqala eduze 30 ubudala. Angifuni umzimba wami uqala ukuthola buthaka ngenxa yobudala, okuyinto kwakuzokwenza ukuba kube nzima futhi kuyakhathaza xaxa udlale nezingane zami. Ngifuna 7 ngaleso kakhulu futhi 3 okungenani. Ngakho okuhle yayo ukuze uqalise zisencane ehloniphekile. Kodwa ngizoqhubeka ukuzama siyishiya ezandleni zikaNkulunkulu futhi Ungakhathazeki ngakho kakhulu.
aneetarh • August 19, 2013 at 7:07 am • Phendula
ngiyabonga Trip kangaka n Jess, n wonke umuntu hu DT wabelane isikhuthazo ngandlela d oda. manje ngiphephile ayisekho bayazesaba gettn washada ekuqaleni ikakhulukazi considern d Eqinisweni DT sobabili abathanda uNkulunkulu. Nkulunkulu bis e…
Dash Eme • August 19, 2013 at 7:07 am • Phendula
Jannon Fitzpatrick, Ngiyavuma ukuthi uNkulunkulu uluthando. Okuwukuphela kwendlela ukuzwa uthando lweqiniso kuyinto ukuzwa okunguye owadala uthando. Phakathi kubantu Singenza lutho ukuthi osezingeni ngaphandle sivumela uNkulunkulu aqondise uthando lwethu izimpilo kanye. “Ithando elikhulu umuntu kunalokhu, ukuthi adele ukuphila kwakhe ngenxa yabangane bakhe” Jhn 15:13. Uthando engayitholi ukwaneliseka self (KevinFerere), noma ukuthola othile abangakwazi ukwanelisa futhi ashukumise amaza kagesi ubuchopho bakho. Kuyindida ukuthi, sitfombe “Ukudalwa kuka-Adamu” ekhasini lakho livela isikhathi Renaissance okwakukhona lapho imibono evamile lothando kanye ukuphola yaphenduka okuthile kwenetisa ngabanye kungakhathaliseki ukuthi izindleko komunye umuntu. Lokho Umdwebo kukodwa zezihlubuki esishoyo ukuthi u-Adamu ezama ukufinyelela ukuba uNkulunkulu, waba nengxenye ekudalweni kwakhe. I Siphukuto lokhu, Michelangelo ekupheleni kokuphila kwakhe ebona lokho ayekwenzile futhi baphenduka, ezama ukuhlanganisa ubuKristu futhi Humanism (Man kokuba esilinganisweni zonke izinto). Lokhu amafilosofi sothando lapho is ngicabanga ziyeza usuka ? okuyinto into efanayo bakwenza ngesiGreki, Renaissance, namasiko lanamuhla. Kukhona ngempela “into entsha ngaphansi kwelanga”-Solomon, futhi ezivela eBhayibhelini.
Paul Jones • August 19, 2013 at 7:07 am • Phendula
hey uhambo beshadile njengoba i kwaba 22 futhi 28 manje. nje kwadingeka anv yethu 6th. unkulunkulu has asibusise 4 intsha. i akhulekele ukuba ugcine nibusisa wena nomndeni wakho.
Danz_17unlocked • August 19, 2013 at 7:07 am • Phendula
Lena lovely Trip, Sengathi uNkulunkulu akubusise kakhulu. u nomfazi ur… futhi kungenzeka abanye b enibusisiwe lokhu ^ _ ^ <3
CLL • October 3, 2013 at 12:15 pm • Phendula
Yayinhle ngubufakazi ubuhle bukaNkulunkulu futhi lokho uNkulunkulu angakwenza ezimpilweni ukuthi ngokupheleleyo owayezinikele Him. Mina nomyeni wami sashada ngokulinganiswa ayemncane (at 24) futhi sengathi wena nenkosikazi yakho, UNkulunkulu wakubona kufaneleka ukuphathisa asibuyisele ndawonye ngenjongo yenkazimulo yakhe. Indodana yethu washada abasha, eneminyaka engu- 20 ekuqaleni kwalo nyaka…befuzela :-) futhi nakanjani Uthole into enhle e unkosikazi kwakhe kokuhlonipha uNkulunkulu. Besifuna lutho ngaye futhi isibusiso.
Karenda • October 3, 2013 at 12:18 pm • Phendula
Yini isihloko enkulu! Mina nomyeni wami sengishadile abasha kanye, bekade ngi 22 futhi umyeni wami 25. Sisanda kugujwa 15 kweminyaka ethile beshadile. uJesu, kuye kwasilethela eduze ndawonye njengendoda nenkosikazi eminyakeni, usifundisa “sifela thina” ukuze uthando kangcono futhi ukukhonza nomunye. Ubugovu bungesinye ngumbhubhisi inombolo eyodwa kwemishado kakhulu.
Siyabonga ukuzimisela kwakho ukuba ube ngaphambili nangobuqotho kwenzeka kukhulunywa ngomshado njengoba luhlobene imiBhalo!
Michael • October 3, 2013 at 1:16 pm • Phendula
Mina nomkami nishadile 21 kanjalo, nokuthi kwaba 11 iminyaka futhi 6 izingane edlule (bio / yokutholwa / ekungeyona eyakhe). Nalapho azange ngazi bona ngineminyaka engu “usemncane kakhulu” ukushada, Ngavele ngazi ukuthi yilo angizange ukwazi ukuphila ngaphandle! KuNkulunkulu kuhle.
AJ • October 3, 2013 at 2:16 pm • Phendula
Ukufunda phakathi kwemigqa: thina samthanda uJesu futhi ngokwemvelo sasingabantwana Horny.
Ngibona lokhu kwenzeke zonke isikhathi esithile phakathi kwamaKristu ucabange agumenti ezinjengalezi ukuthi ukudansa azungeze isisusa sangempela kukhona hilarious. Eyoba yikho onesono nje ocansini, ngakho kuwukuhlakanipha zokungajahi sokuphila konke.
CLARA • October 3, 2013 at 2:21 pm • Phendula
UNkulunkulu kuqalile ukuthi Umshado uyakufa ukukubona kukho konke. Wena isikhuthazo abasha christian intsha kanye imibhangqwana Trip. inkosi ikubusise!!
JOB • October 3, 2013 at 2:52 pm • Phendula
Ngashada ngineminyaka engu- 21 futhi ngawo lowo nyaka njengoba uhambo Lee, e 2009. Ngahlangana asichitha enkonzweni lapho ngineminyaka 16 ubudala futhi besilokhu sindawonye ngoba cishe 8 iminyaka manje. Sakhonza uNkulunkulu ndawonye AYCM zezinkonzo, ukuzama ukusiza nemizana nokwabelana izwi likaNkulunkulu ePhilippines. Satshela nomunye kwansuku “Ngiyakuthanda ngoba ngibona ukuthi umthanda kangakanani uNkulunkulu”. Angikhumbuli nakanye uzisole ngicela ashade naye. Okwenzeka esikhathini esidlule 4 kweminyaka ethile beshadile kuye kwaba isibusiso.
THATMAN • October 3, 2013 at 2:55 pm • Phendula
https://twitter.com/KEVINFERERE <<< kuyinto kuyinto LOKHU umfana?? lol
Isaka • October 3, 2013 at 4:06 pm • Phendula
Izwi likaNkulunkulu ngempela obuphakeme. IzAga 18:22 okuletha ngokucacile lokhu.
”Ophindisela Ofumana umfazi uthola yinto enhle, futhi umusa obtaineth we Lord''.
azithathe Yami noma ubani ofuna ukushada iwukuba wokuqala nomkhulu kunabo bonke sicele isiqondiso sikaNkulunkulu ekukhetheni umlingani ilungelo. Thina njengabantu shouldnt ukuzikhethela futhi forcifully ukucela uNkulunkulu ukuba abusise ke. Kunalokho, thina anikele belalela Imininingwane, bazikhandlele ukuthola umusa kaNkulunkulu futhi ucele isiqondiso ukuze silandele isiqondiso sakhe ezimpilweni zethu.
SteveMcMillon • October 3, 2013 at 4:40 pm • Phendula
Ngiyalihlonipha lokhu kangaka!! Its wakhuthaza kangaka ngoba mina nginesifiso ukuba ashade Selokhu ngazalwa 6 yrs ubudala futhi alot of abantu bangifake phansi ke. Ngezindlela eziningi ezidalwe nokungazethembi kimi. Siyabonga futhi lokhu!
Terri • October 3, 2013 at 4:59 pm • Phendula
Esikhathini esingaphezudlwana 35 edlule ngashada esikoleni esiphakeme isithandwa sami. Sobabili 18, cishe 19. Sibe naysayers eziningi futhi ubaba wami ngisho wayethemba Ngangivuka ohlukanisile ukuthola udokotela. Lapho uNkulunkulu ulungiselela umshado akunandaba yini engu-umakoti nomkhwenyana. izibusiso eziningi!
Missy • October 3, 2013 at 6:01 pm • Phendula
Ngashada ngisemncane ukuthi kanye (20 ukuba ngqo). Manje e 32, Nginomuzwa wokuthi ungakwazi ashade nganoma isiphi yobudala enikeziwe nganoma isiphi isikhathi kunoma ubani… futhi uNkulunkulu uzosebenzisa umuntu ukuthi uyaMthanda kunoma isiphi isimo ukuba sisondele yena lowo muntu… zonke kufanele ube uzimisele ukuba sibe ngcwele njengoba Ungcwele. Yingakho Angikholwa kukhona “Iyona yodwa”… Noma yimuphi umuntu abakhetha ukushada, babe “lowo” i-eachother :)
Missy • October 3, 2013 at 6:02 pm • Phendula
kodwa yebo lokhu kuyiqiniso kuphela uma kokubili ningamakholwa
Johnny • October 3, 2013 at 10:27 pm • Phendula
Ngibonga kakhulu. Mina nomkami inendaba efanayo. Umngane uthumele le namuhla futhi kwaba yilokho kanye engangikudinga. Dumisani iNkosi yethu uJesu!
Lise • October 3, 2013 at 10:39 pm • Phendula
Ngiyabonga kakhulu ngalesi sihloko! I am 36 ubudala futhi ngiye beshadile 19yrs…Yep, bekade ngi 17 ngisho nakakhulu lapho ngishada umyeni wami 18yr ubudala! Sine izingane eziyisithupha, abathanda iNkosi futhi bajabule kakhulu :) sisuke zabuza imibuzo efuze lena ngaso sonke isikhathi futhi lapho kungase kungabi ukukhetha ethandwa noma choice esifanele eziningi, Ngijabula kakhulu futhi isifuba kwansuku ukuthi ngenza isinqumo esihle kithi.
Steffan • October 3, 2013 at 11:18 pm • Phendula
Kuyamangaza lokhu. Ngazi amaningi abantu abacabanga lokhu Iphutha elikhulu kunawo wonke ekuphileni kwakho. I am 22 futhi ngempela kuye kokucabangela le nomuntu ngizazi nabathandwayo kusukela Sophomore yami unyaka esikoleni esiphakeme. Ngingu izinto uqinisekile kungukuthi Sunshine kanye uthingo ngawe, nor ncisheka I ukuba kube mina. Nginibonge ngokubeka eceleni zonke engemihle futhi abheke obanzi kunalowo osencwadini kaDaniyeli nokuthi yini wazizwa Nkulunkulu ukukuholela. Uma kungekho omunye ihlala bajabule ngawe, Ngingu ngempela.
Kim Hunter • October 4, 2013 at 8:30 am • Phendula
Ngihlangana nomyeni wami ngesikhathi 14 sashada lapho ngineminyaka 21 futhi kwaba 23 besilokhu sindawonye ngoba 22 iminyaka futhi eshadile 15 alabo 22 akukho okungalungile oshadayo amaphuphu ayo nje indlela umuntu ubheka ukuphila….ngoba ngempela lifr yakho yilokhu ukwenza kube….futhi yebo mina nomyeni wami zigcinwa bese ukholwa unkulunkulu futhi siphila ukuphila kwethu kuye nge unkulunkulu zonke izinto zingenzeka ikakhulukazi umshado lutho eside healthly ngothando lula kodwa unkulunkulu ungenza…….UBUSISWE!!
Yisho: Kungani mina ukushada usemncane kangaka? - Kingdom Cakers Kingdom Cakers
Cherisse • October 4, 2013 at 9:43 am • Phendula
Yeka ukuthi kuyisibusiso kanjani ukwazi iNkosi futhi ukuqonda izwi lakhe. Ngifisa kwakunabantu abangaphezu abanjengawe. Ungavumeli uDeveli kukudikibalise. Siyazi ukuthi yonke indawo.
GrantYoung • October 4, 2013 at 12:44 pm • Phendula
Mina nomkami washada sasesifile 22 futhi ngaba nokuhlangenwe nakho okufanayo. Abangane ukuthi basinda futhi ezingalondoloziwe wafuna ungazise kwadingeka ukuphila kakhudlwana ukuphila. wezinwele wami sangikhumbuza zonke Clubbing futhi emaphathini ngingenzenjani. My “vala” abangane wachaza nokuthi kwakunezinto nezinye zolwandle ukuhlola. Well, thina empeleni washada emhlabeni ngesikhathi esifanayo 3 Eminye imibhangqwana engu zethu senza! Sesikhathele emancane ngenani kodwa neze wedwa futhi kuyakhuthaza khumbula ukuthi.
Ngomusa kaNkulunkulu thina kugubha 3 iminyaka futhi kube amangalisayo! Siyabonga ukwabelana Trip!
Mark • October 4, 2013 at 4:24 pm • Phendula
azithathe kwami ​​bekuyoba ukuthi uma uya ukushada usemncane kangaka, wazi kangcono nemiphumela yokwenza kanjalo. Kunzima kakhulu ngisho kunakho izimo. Uma ungeyena ukulungele ukusebenza enzima uke wasebenza futhi ngokuphelele besashisa ukubhekana eziningi nokudumazeka nosizi, musa ubhalisele ke. Nokho, uma ukwazi ukubekezelela (futhi abanye abantu benza) uma kungaba nomvuzo ngezinye izikhathi.
Kevin • October 4, 2013 at 5:42 pm • Phendula
Ngiyakuthanda lokhu ngombono eBhayibhelini ngokusekelwe. Kuyinto ezingavamile phakathi waseMelika ongumKrestu, lapho izakhiwo amasiko nezenhlalo kangaka anti-umshado, ukubona umuntu omusha, ngisho umuntu omdala, ngombono ovuthiwe ngokomoya ukubaluleka isikhungo kaNkulunkulu. Kususelwa eziningi amazwana Ngifundile, nalo mbono umsindo angaphandle ngakho abantu, ngisho eBandleni ngoba thina ozivumele thina ukuncika ekufezeni izindinganiso zomphakathi wangaleso usuku kunokuba neqiniso kweBhayibheli ngalokho uNkulunkulu ubathembisa iyigugu besikhumbula futhi besazisa. Ukuthandazela kwenu uhambo, ukugcina ukwabelana iVangeli futhi iqiniso lezwi likaNkulunkulu yenza kwaba lula futhi yangempela empilweni yekholwa.
PastorRob • October 5, 2013 at 6:55 am • Phendula
Ngifuna ukukwazisa Trip- Lee sengishadile 2 ngemuva kwezinyanga Ngase ngiphenduka 21. Ingabe UNkulunkulu bonke kuwo? Ingabe Yena zonke kuwo naphezu abantu umbono nokucabangisisa zabo mayelana nokuthi kungani mina akukafaneli nishade engangikudinga ukulinda. We muntu kaNkulunkulu mina beshadile 16 iminyaka manje 2 amantombazane amahle ngingubani kahle greatful kuNkulunkulu kube ehlakaniphile Kokuhlonipha UNkulunkulu, ohloniphekile kwezindebe kuyigugu elinqabileyo. Ubuhle mayelana nobufakazi bakho lalihloselwe ngawe ukulitshela!!!
Yisho: Single v. ushadile… | Injongo Yokuphila
Mavis • January 28, 2014 at 10:10 am • Phendula
Enginakho iseluleko sabo bonke abantu abasha. Uma 18 noma phezu, ukuqala ngifuna umngane womshado! Ubulili ngaphandle uma umshado uyoletha kuwe lutho kodwa ngenxa yobuhlungu benhliziyo kuba, leaness umphefumulo impilo embi, engqondweni nasemzimbeni. Ukushada uyajabulisa futhi booster kwezomnotho! Ungathola ngakho kwenziwa okuningi futhi ujabulele lufe kakhulu uma awuwedwa. Abazali bakho kungenzeka safike sahlukanisa ngoba abazange ukulandela izinhliziyo wabo ebusheni! Anginayo isikhala ukuchaza konke, kodwa zakhelwe ukuba zalala. Qala ngokwenza uhlu yor ka kumelwe banezimfanelo zisuka futhi bashade abasha ngenkathi unayo yonke inhliziyo yakho ukunikeza. I am 53 futhi grayeful kakhulu ukuba emshadweni. Ngishada ngineminyaka ukuthi 31 -izikhathi ngizwa ubuhlungu abaningi futhi eziningi uma okulahlwayo ubusha-indlela kwephuze kakhulu. Ithemba kwenziwe uma eyakuba ngumuntu ohlakaniphileyo ebusheni bakho futhi ukuyithanda ngokuba khona kuyo!
GOSPELMAGDOTCOM • February 6, 2014 at 8:33 am • Phendula
Thina ngiyazisa ukufunda izihloko zakho.
Ayikwazanga osinikeza ukugunyazwa ukuhumusha izihloko zakho zibe French futhi ukuwashicilela kwi website yethu: gospelmag.com?
Ngiyabonga kakhulu kusengaphambili impendulo yakho.
Mercy • February 15, 2014 at 3:14 pm • Phendula
Umngane wami uthenge kimi leli bhuku ngesikhathi sinani intsha mayelana nokuba abasha, owesifazane yamaKristu enesizotha. Yiqiniso ngoba zikhuthaza ukulinda kuze kube ngemva komshado futhi konke futhi kwadingeka amavesi kulo. It okukhulunywa futhi wayekhuphuka alilethe yena ukuthi uNkulunkulu akafuni ukuba usuku. Ngenza isifungo kimi ukuthi ngithanda ukuba imingcele guys (Ngicabanga cishe am kwenziwe ngokuphelele ziba amahloni). Ngingathanda ugcine izinto ezithile ngomshado kodwa ngaphakathi nangaphandle kwe-esidlule 2 iminyaka Ngiye ayithole ecindezelekile. Ngiye ngizizwa nginesizungu. Ngazibuza ukuthi yini engalungile nami futhi uma Ngikhathazekile okuhle ngokwanele. Angiyona. Angazi njalo vesi leBhayibheli. Ngidinga ukufunda okuningi. Bengilokhu ngizama futhi angifuni ukuba azi noma iyiphi nje umfana ngoba ngingaba siphuke imimoya futhi kungaholela kimi sehle endleleni Nkulunkulu akafuni nami phansi kodwa ngithola Uwedwa. Kuba njalo enhle ukubona kwenye intsha uthando. Kuyinto ngisho NGCONO uma ushade futhi ngiyazi akusiwona ezinhle ukuba nomona kodwa wonke umuntu uthi “oh, ke ezophuma ngesikhathi YAKHO”. Ngicabanga ngakho njalo muva nje. Ngahlangana nale nsizwa enhle ngempela. Thina abanobuntu efanayo kakhulu kodwa wathi akusho ukuya esontweni. Watshela inkantolo wathi wayedlula uyakholelwa kuNkulunkulu futhi ngiyazi Angikho Ilungile ngokwami ​​kodwa angikwazi ukuba uzibuze ngoba angicabangi ukuthi waba usukumela phezulu afune uNkulunkulu uma Ngizofika uzisole okuthile. Abesifazane kungafanele sizame futhi ushintshe amadoda ngezwa. It kuholela ekudumazekeni okuthiwa. Well, Ngikhathele sokulinda. Ngicabanga uzofunda indlela okunzima. Angikho ucansi Nokho. Ngikhathazekile 23 futhi namanje iqine ngalolo kodwa Ngididekile kungani mina awufanelwe indoda manje. Wonke umuntu uthola ukuthi bafuna. Kuyacasula ukuze angikwazi ecabanga guys. Ngicindezeleka Kangaka ngezinye izikhathi. Uma ngishada lokhu umfana futhi ayikashintshi sizokutjhukumiseleka ngokungalingani ejokeni? Abanye abantu konke. Futhi Angikho bethi imali. Ngifuna omunye ozongithanda. Kuyinto kakhulu ukuchaza.
Natalie • Mashi 11, 2015 at 1:21 pm • Phendula
Wena namanje kuphela 23! :) Ungakhathazeki lapho engayitholi le “kwesokudla” eyodwa, akukho umuntu oyedwa nje phandle lapho siyindlela ezinhle. Futhi nje ukucacisa: Nina nibaluleke IT. Kunesizathu ukuthi wena kulomhlaba ngalesi sikhathi. Uyigugu kuJesu, nje ukufunda abathi izithembiso zaKhe uma uqala ukucabanga ukuthi akuzona kunomvuzo. ozithandayo wami: “Angisoze noma akulahle.”
Othile ngangazi muva safike sahlukanisa, futhi yinkinga enkulu emshadweni wabo ukuthi wayenomgomo ofana wayeyikholwa futhi wayengasakwazi. Isinqumo kuzodingeka ukwenza kuyoba “unguNkulunkulu kunomvuzo?” Gcina efuna kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, futhi YENA uyoqondisa wena. Uzakuniholela. Ngeke sasinikeza isikhuthazo udinga lapho uzizwa ucindezeleke kakhulu futhi ecindezelekile. Okuthile engiyithole iwusizo kakhulu ukufunda imiBhalo ngokuzwakalayo ngaphambi kokuba ngihambe ngiye embhedeni, futhi ikakhulukazi lapho ngizizwa ngidangele nangaphansi ukuhlasela okuvela isitha. Ongeke wazi ukuthi uNkulunkulu unalo isiseduze.. uma kuphela ulinde. Ngiyazi kuzwakala kanjalo kanzima nangokwethembeka, ecasulayo, kodwa uma uyoqhubeka efuna uJehova, Uzosanelisa kule sizini. Kunesizathu wena kule sizini! Ongeke wazi ukuthi uNkulunkulu uzosebenzisa ke kube ngubufakazi ukusiza abanye amantombazana ulwa into efanayo! :) Ngithemba lokhu kwasiza ngandlela-thile! Izibusiso!
tshireletsopreciousntumo • November 7, 2014 at 2:43 am • Phendula
Yilokhu engangidinga ukukuzwa, siyabonga futhi UNKULUNKULU akubusise
Micheala • Mashi 22, 2015 at 8:32 am • Phendula
Ngashada ngo- 21 futhi wayemuhle …
Awukwazi ukusiza ungubani ukuthandana nalo noma uma uqala ukuthandana nabo,
Bengingacabangi ukuthi ngiyoke kungaba uhlobo ukushada usemncane futhi uphuthelwe “izinto ezimnandi” empilweni .. kodwa i ungacabangi i benza, Ngisanda wabelane yami “izinto ezimnandi” nomuntu Ngiyakuthanda futhi ngangingaziboni ephilayo ngaphandle.
Gisselle • Mashi 28, 2015 at 7:41 am • Phendula
Sawubona Ngingumfana Gisselle Ngingumfana besuka eHonduras. Ngikhathazekile 18 ubudala futhi isoka lami 19. sahlangana 15 izinyanga ezedlule esontweni lakhe e-New York! Ngihlala e Honduras.. Ngakho-ke kuye kwaba nobuhlobo eside ibanga. Ngingenile Ngomnyaka wesibili ekolishi lami ngakho njengoba. Sithole kwakhulunywa ngazo oshadayo. Futhi ezinye izihlobo zethu nabadala isonto lakhe lisekela nisitshele iyona into enhle kakhulu ongayenza. Ngisakhuluphele okungavikelekile ngakho.. Umama akayena evulekile kakhulu ngami oshadayo abasha kangaka njengoba odadewethu. Siye ubethandaza kusukela siqala wacabanga ngomshado njengoba kungenzeka. Uma ungase ungibhalele ku-imeyili yami i siyokwazisa!
Jennifer • Julayi 8, 2015 at 3:11 pm • Phendula
Sashada 21 iminyaka edlule. bekade ngi 19 futhi umyeni wami 21. Thina baye basondelana kakhudlwana komunye nomunye futhi akhulume noNkulunkulu. izingane ezintathu kamuva sifunani phambili olandelayo 20.
Charles • August 9, 2015 at 11:07 pm • Phendula
Ngangifuna ukuba abonge iqondile indlela phambili ukuthi ushumayela ngabo eZwini likaNkulunkulu,. Ngiqeda kubuka le 'Fallin’ umculo ividiyo ngemuva kosuku emizileni nezilingo futhi sengathi uNkulunkulu wakhuluma ngqo lokho ngibhekene nani. Amazing Isipho uGrace nokuthi sabelana singenakulinganiswa noma uthathwe kalula. Ngiyabonga kakhulu for kabusha amehlo ngibone into elisisekelo ngakho ekuhambeni bami noNkulunkulu. Ngiphinde sithandazele ukuba uNkulunkulu uzonibusisa enkonzweni yakho.
Chidera • August 18, 2015 at 2:48 pm • Phendula
Uma uNkulunkulu kukubonisa umuntu futhi umuntu ugqozi efanayo uNkulunkulu njengoba wena ukulungele ukuhamba nawe yonke indlela. akunandaba ukuthi uneminyaka emingaki, kanye kufika isikhathi ushada. Into nje Mazise yena kuzo zonke izindlela zakho, yena uzoba wenze izindlela zakho ziqonde (IzAga 3:6). Vele ube nogqozi nothando ngoNkulunkulu, ngesikhathi esifanele uzobona ukukunikeza helpmate yakho abazokujabulela ukuma nawe kukho konke. Ungavuli wanna ingxenye, ke musa ahlukane Nkulunkulu. Ngo ZONKE Mazise yena ezindleleni zakho, he'ell wenze indlela yakho iqonde.
stacy • December 14, 2015 at 3:57 pm • Phendula
Umyeni wami 3/4 black lengxenye yesine emhlophe.(ngimhlophe ngebala). Umyeni wami sengishadile abasha futhi mina 18 uya 19 futhi umyeni wami 20. Abantu Usitshele ukuthi, esizenza iphutha futhi uzothumela ngesehlukaniso. Asilalelanga sashada futhi manje besilokhu 16 iminyaka. Uzilawula.
jaysmith • Mashi 12, 2016 at 7:34 pm • Phendula
Kevin–ubonakala sengathi ngilezinto ezinlutshwana phansi. Futhi wenza indlela yakho kuze. Qhubeka, kid! Ekupheleni, ukwazi wena isigamu kanye kuyinto iningi vattle, naphezu kwanoma yikuphi ukushiyeka. Izibusiso!
TheRealHonestTruth • Mashi 27, 2016 at 2:44 pm • Phendula
Nokho abantu phandle lapho baye babusiswa inhlanhla Excellent kakhulu nge CHA izinkinga zezempilo nhlobo futhi kokuba nishadile nomkhaya nge imali eningi impela kuningi kakhulu esibonga kakhulu ngoba ngempela kufanele abe CHA isizathu ukukhononda uma iningi lethu HHAYI ukuthi unenhlanhla nhlobo yize abaningi benu akazange ashade usemncane kakhulu lapho kukhona eziningi ukuthi zisekhona ndawonye namuhla.
Tye Smith • June 26, 2016 at 9:55 pm • Phendula
namasu kakhulu wafika elivate ekamu ku ulwesihlanu 24/6/2016
RachelSanchez • November 2, 2016 at 1:14 pm • Phendula
Mina nomyeni wami washada ekuqaleni kwalo nyaka. Ungu 22, kanti mina ngingumuntu 21. I get ebuzwa ngaso sonke isikhathi ukuthi kungani ngingeke ngibe “baphonse ebusheni bami kude” noma kungani bengicabanga ngisho ngomshado ekolishi. Mina Akumangalisi uthole imibono elimazayo kakhulu kusukela abesifazane abadala ababonakala obukela phansi kwami. Kuyinto ezibuhlungu ukuthi abanye engakwazi ukuwabona engikuyala empeleni ngempela ejabulela ebusheni bami nomuntu engilithandayo kakhulu emhlabeni. Kuyadabukisa uma abantu (izizukulwane ngisho amadala) ucabanga ukuthi kungcono ngokuphelele emihle abantu 20s zabo ukulala emhlabeni, kodwa lapho sebeshadile kungcono okuthusayo esisabekayo. Thina nje Sethemba umshado wethu anganika abanye ukuthatha igxathu uma benomuzwa wokuthi ukulungele, kungakhathaliseki ukuthi yini umphakathi uyabatshela.
I Sad kakhulu Iqiniso • November 27, 2017 at 8:09 am • Phendula
Bese kuba khona sibaningi amadoda aqotho elilodwa besethemba ngempela ukuhlangabezana owesifazane omuhle ukuze axazulule phansi, kodwa ngeshwa namanje awenzekanga kithi. Futhi amadoda nabesifazane ababe kakhulu esibusisekile kakhulu ukuhlangana komunye nomunye futhi abe nomkhaya okuyinto wena ngempela ngakho kakhulu esibonga ngakho.
alvina.reborn • January 3, 2018 at 2:39 pm • Phendula
Siyabonga alot Trip. Iminyaka Bengilokhu ngithi enhliziyweni yami ukuthi angikwazi nje ukushada esikhathini esidlule kweminyaka ethize. Kodwa manje sengazi kangcono.